Ngaba iLizwi lakho lokuBala liFuthe kutyelelo? | Martech Zone
Ngaba iLizwi lakho lokuBala liFuthe kutyelelo?
NgoLwesine, Agasti 28, 2008 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Izolo, ndibhale njani bala iLizwi lakho lamagama usebenzisa i-MySQL Kwiposti yebhlog yakho kwiWordPress. Ndifuna ukuhlalutya iiposti zam ukuze ndibone ukuba ibhlog yam ibichaphazeleka ukuba zide kangakanani izithuba zam. Nazi iziphumo!
Ukutyelelwa kwamaphepha kuthelekiswa nokubalwa kwamagama
Isiphumo? Ngeenyanga ezintandathu zezithuba zemihla ngemihla (ngamanye amaxesha izithuba ezininzi ngosuku) kunye nenani lamagama ahambelana nosuku ngalunye, ndingatsho ngokuqinisekileyo ukuba inani lamagama alwenzi mahluko. Yintoni eyenze umahluko yayikwangumgangatho wezithuba. Njengoko ubona, ibhlog yam ayikhange ihlupheke xa bendinezithuba ezimfutshane okanye xa ndinezithuba ezinde.
Isitshixo kwibhlog kukubhala iiposti ezinkulu, hayi ukubhala iinjini zokukhangela! Ukuxinana kwegama eliphambili kunokubonisa iphepha lakho ngokufanelekileyo, kodwa i-backlinks evela kwezinye iisayithi iya kuqhuba iblogi yakho phezulu kwiphepha leziphumo. Ndingathengisa i-backlink kwisitishi esinegama eliphambili nangaluphi na usuku!
Ukuba isitayile sakho sinomoya omde (njengam), uza kutsala abafundi abathile abakonwabelayo ukujonga uninzi lopelo kunye neempazamo zegrama endizenzayo. Of Inani lotyelelo kwibhlog yam lihlala lihleli kwaye likhula!
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba indawo yam ihlupheke kakhulu kwi-injini yokukhangela (malunga ne-20%) xa mna nditshintshe igama lam lommandla kwaye ulinde i-reindexing evela kuGoogle.
Ukungafani kakuhle ukuya esiphelweni kungenxa yokuthandwa okuqhubekayo kweyam Ixabiso le Starbucks iposti- yenye yezona blog zithandwayo… kwaye yeyona inde.
tags: b2c facebookIziphumo zeshishiniizikhalazo zabathengiukwaneliseka kwabathengifacebook yeshishiniqhinga lokuthengisa u-facebookFAQsphucula iziphumoukunyanisekaIiVidiyo zeNtengisoisininziimyonoelwandle
Ukulindela okunyanisekileyo kuzisa ukoneliseka kwabaThengi
Agasti 28, 2008 kwi-4: 04 AM
Inqaku elihle, Vumelana nawe nge-100%. Ndiyakholelwa nakwihlabathi elincinci, akukho xesha kwaye ngenxa yoko ndihlala ndibhala iiposti ezincinci okanye amanqaku eebhulethi.
Agasti 29, 2008 kwi-7: 30 AM
Ndidla ngokubhala izithuba ezimfutshane kuba ndisoyika ukudinwa kwabafundi. Ndiyavuya ukubona ukuba ayizukuba yeyona nto ndiyikhathazayo leyo.